10 sano kadib: Soomaalida Norway iyo xusuusta qarixii Oslo iyo xasuuqii Utøya. - NorSom News
Home Vedio/Muuqaalo 10 sano kadib: Soomaalida Norway iyo xusuusta qarixii Oslo iyo xasuuqii Utøya.
10 sano kadib: Soomaalida Norway iyo xusuusta qarixii Oslo iyo xasuuqii Utøya.
Previous articleOslo: Gabar soomaali reer Stavanger ah oo Oslo ku geeriyootay.
Next articleUDI og UNE oo joojiyay dadkii ay loo tarxiili lahaa dalkan.
Reysulwasaarihii Norway oo wareysi siiyay NorSom TV
Daawo: qaabkan ayaad ku ogaan kartaa in magacaaga iyo aqoonsigaa lacag aadan dirsan lagu diray.
Daawo: Booliska- 40 qof ayaa magacyadooda lagu dirsaday lacag xawaalad oo aysan iyagu dirsan.
Daawo Barnaamijka cusub ee dhacdooyinka todobaadka ee W. NORSOM TV